एयर पेस्तोलसहित पक्राउ
नेपालगन्ज, भदौं १७ गते । नेपालगन्जको जमुनाह नाकाबाट एयर पेस्तोल सहित एकजनालाई पक्राउ गरिएको छ । भारतबाट फर्कदैै गरेका सुर्खेत भेरी गंगा नगररपालिका ९ का लालसिंह रानालाई शनिबार बिहान पक्राउ..
नेपालगन्जमा बकरीदको रौनक
नेपालगन्ज, भदौं १७ गते । मुस्लिम समुदायको उल्लेख्य बसोबास रहेको बाँकेमा धुमधामका साथ बकराईद पर्व शनिबार मनाइएको छ । बकराईद (इदुज्जोहा)को अवसरमा बाँकेका हजारौं ईस्लाम धर्मावलम्बीहरुले शनिबार ईदगाहमा जम्मा भएर सामुहिक..
कोहलपुर नगरपालिकाको बजेट ५० करोड
बिहीवार, भाद्र १५, २०७४ साल
बाँके, भाद्र १४ – कोहलपुर नगरपालिकाको वार्षिक बजेट ५० करोड १ लाख ५१ हजार तय भएको छ । नगरका उपमेयर सञ्जु कुमारी चौधरीले बुधबार नगर परिषदमा सो बजेट प्रस्तुत..
चार करोडको जग्गा बिक्री गरेका दिनानाथ सम्पर्कविहिन
बुद्धबार, भाद्र १४, २०७४ साल
नेपालगन्ज, भदौं १४ । केही दिनअघि चार करोड २० लाखमा जग्गा बिक्री गरेका बाँकेको जानकी गाउँपालिका ३ मानपुरका दिनानाथ शर्मा घर परिवारसँग सम्पर्कविहिन भएका छन् । दिनानाथ र आफन्तहरु शालिकराम शर्मासहित..
सामुदायिक विद्युतीकरणबाट अलग हुन विद्युत प्राधिकरणमा निवेदन
खजुरा , भदौं १४ – बाँकेको खजुरा गाउँपालिका ४ ईगाउँका स्थानीयले पटक पटक विद्युत अवरुद्ध हुने समस्या अन्त्यका लागि सामुदायिक विद्युतीकरणबाट अलग हुन चाहेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन्..
बाढीबाट बाँकेमा ८६ विद्यालयमा क्षति
नेपालगन्ज, भदौं १३ गते । बाँकेमा बाढीका कारण ८६ वटा विद्यालयमा क्षति पुगेको छ । बाँकेका जिल्ला शिक्षा अधिकारी भीम बहादुर साउदका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ८६ वटा विद्यालयका करिब..
मब क्याम्पसमा प्राध्यापकमाथी परीक्षा केन्द्रमै यौन दुव्र्यवहारको आरोप
मंगलवार, भाद्र १३, २०७४ साल
नेपालगन्ज, भदौं १३ । नेपालगन्जस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा त्रियाशिल विद्यार्थी संगठनले शिक्षण सहायक रबरिाज शर्माले एक परीक्षार्थाी माथी यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् । क्याम्पसमा क्रियाशिल अनेरास्ववियु बाँकेका विद्यार्थी..
बकर ईदका कारण परीक्षा स्थगित
नेपालगन्ज, भदौं १३ । त्रिभुवन बिश्व विद्यालयले यहि १७ गते निर्धारण गरेको सबै तहका परीक्षा स्थगित गरेको छ । मुस्लिम समुदायको पर्व बकरईद परेको कारण देखाउदै त्रिभुवन बिश्व विद्यालय परीक्षा..
ईगाउँमा विद्युत किन अवरुद्ध ?
खजुरा, भदौं १३ । बाँकेको खजुरा गाउँपालिका ४ ईगाउँमा एकसातादेखि विद्युत अवरुद्ध हुँदा नागरिकलाई सास्ती भएको छ । बर्षातको समयसम्म सातासम्म अन्धकारमा बस्नुपर्दा झनै समस्या थपिएको स्थानीयले बताएका छन् ।..
नेपालगन्ज, १२ भदौ । बाँके युनेस्को क्लबद्धारा नेपालगन्ज नगर क्षेत्रका विद्यालयमा संचालित सहयात्रा परियोजना अन्तर्गत स्थानिय सरस्वती माध्यमिक विद्यालयलाई तीन थान कम्प्युटर उपलव्ध गराएको छ । सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा बालबालिका..
अब बागेश्वरी मन्दिरको संरक्षण समितिले गर्ने
नेपालगन्ज भदौं १२ गते – नेपालगन्जस्थित बागेश्वरी मन्दिरको समग्र व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरिएको छ । बागेश्वरी मन्दिरलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नेपालगन्न्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा धवल शमशेर राणाको अध्यक्षतामा..
साउदी अरबबाट कमिलालका लागि युवाहरुको सहयोग
बैजापुर भाद्र १२ – बाँकेको खजुरा ईगाउँ लगायतका स्थानबाट वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदीअरबमा रहेका युवाहरुले बाँकेमा बाढी प्रभावित एक परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेका छन् । साउन अन्त्यमा आएको बाढीले घर..
नेपालगन्जमा घुम्ती पसलमा यौन व्यवसाय
आईतवार, भाद्र ११, २०७४ साल
नेपालगन्ज, भदौं ११ । नेपालगन्जमा पछिल्लो समय सामान्य घुम्तीपसलमा समेत यौन व्यवसाय हुने गरेको पाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले आईतबार नेपालगन्जको शहिद सेतु विक चौक नजिकै रहेको एउटा..
शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न कोहलपुरका मेयरको आग्रह
कोहलपुर, भदौं ११ । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाका प्मुख लुट बहादुर रावतले नगरपालिकामा शिक्षाको गुणस्तर उकास्न बिशेष ध्यान दिन सबैमा आग्रह गरेका छन् । कोहलपुर नगरपालिकाका शिक्षकसंगको भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा..
रक्सी सेवन गरी कार्यालय पुगेका मालपोतका सुब्बा पक्राउ
कञ्चनपुर, भदौं ११ । रक्सी खाएर कार्यालय जाने एकजना कर्मचारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । कार्यालय समयमा रक्सी खाएकाले प्रहरीले जिल्ला मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरमा कार्यरत नायव सुब्बा धर्मराज जोशीलाई पक्राउ..
नरैनापुरमा प्रर्याप्त राहतका लागि एमालेको ध्यानाकर्षण
नरैनापुर भाद्र ११ – राप्तीपारीको नरैनापुर गाउँ पालिकामा हालसम्म प्रर्याप्त मात्रामा राहत बितरण हुन नसकेको भन्दै नेकपा एमाले नरैनापुर गाउँपालिका संगठन कमिटीले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कमिटीका संयोजक केशबराम यादवको अध्यक्षतामा..
बाँकेका बाढिपीडितलाई जापानबाट सहयोग
बुद्धबार, भाद्र ७, २०७४ साल
नेपालगन्ज, भाद्र ०७ – बाँकेका बाढिपीडितलाई जापानबाट सहयोग गरिएको छ । बाँके – बर्दिया मैत्री समाज जापानले बाढी पीडितको लागि पहिलो चरणको राहत सामाग्री वितरण गरेको हो । पहिलो चरणमा बाँकेको डुडुवा..
पत्रकार महासंघमा गोविन्द आचार्य विजयी
मंगलवार, भाद्र ६, २०७४ साल
काठमाडौं, भदौं ६ । नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय अध्यक्षमा पुर्ब उपाध्यक्ष गोविन्द आचार्य विजयी भएका छन् । मंगलबार बिहान घोषित परिणाम अनुसार ७३२ मत प्राप्त गरी आचार्य विजयी भएका हुन..
यसरी जित्दैछन तिर्थ कोईरालाले पत्रकारको महासंघको अध्यक्षमा
सोमबार, भाद्र ५, २०७४ साल
काठमाडौं, भदौं ४ गते । नेपाल पत्रकार महासंघको २५ औं महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सोमबार मतदान हुदैछ । पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि करिब एक हजार ५००..
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि नगरपालिकाको अग्रसरता
आईतवार, भाद्र ४, २०७४ साल
कोहलपुर, भदौं, ४ । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले कोहलपुर क्षेत्रका सामुदायिक माध्यमिक बिद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुसंग आइतबार अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर लुट बहादुर रावत, उप–मेयर सञ्जु कुमारी चौधरी,..
बाँकेका बाढीपीडितलाई जाजरकोटबासीको राहत
शुक्रबार, भाद्र २, २०७४ साल
नेपालगन्ज, भदौं २ । पहाडमा जाडो बढे तराईले सेक्नुपर्छ । आँधी आए तराईमा पहाडले छेक्नुपर्छ । दिनेश अधिकारीको रचना र स्वरुपराज आचार्यको स्वरमा रहेको यो गीत जस्तै एक स्थानमा बस्ने नेपालीलाई..
सडक बनाउदै सेना-प्रहरी
बिहीवार, भाद्र १, २०७४ साल
कम्दी, भदौं १ गते । बाढीपछि भत्किएको हुलाकी सडक अन्तर्गत बाँकेको नेपालगन्ज फत्तेपुर जोड्ने सडक संचालनका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । नेपाली सेना , शास्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी..
कमिलालको घर सरकारले बनाईदिने, ६ लाख सहयोग
नेपालगन्ज, भदौं १ । बाढीपछि घर भत्किदा तीन छोरी गुमाएका बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका ४ लालपुरका कमिलाल थारुको परिवारका लागि सरकारले घर बनाईदिने भएको छ । बाढीपीडितको अवस्था बुझ्न बिहिबार फत्तेपुर..
बाढीपीडितको अवस्थाबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्री देउवा नेपालगन्जमा
बाँके,भदौ १ गते । बाँके, बर्दिया, दाङ्ग र कैलालीको बाढिपछीको अबस्था निरिक्षणका लागी प्रधानमन्त्री देउवा नेपालगन्ज आईपुगेका छन् । सिचाई मन्त्री सन्जय कुमार गौतम सहित रहेका प्रधामन्त्री देउवा नेपाली सेनाको..
बाँकेमा बाढीबाट करिब ९ हजार घरका ४७ हजार बढि प्रभावित
नेपालगन्ज, साउन ३२ । बाँकेमा बाढीबाट करिब ९ हजार घरका ४७ हजार बढि प्रभावित भएको जिल्ला प्रशासन कायाृलय बाँकेले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र पौडेलका..
बाढीपीडितका लागि राहत संकलनमा अखिल
बुद्धबार, श्रावन ३२, २०७४ साल
नेपालगन्ज, साउन ३२ । नेकपा एमाले सम्वद्ध अनेरास्ववियु बाँकेले बाढीपीडितका लागि राहत संकलन सुरु गरेको छ । बुधबार महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा राहत संकलन गरिएको अनेरास्ववियु बाँकेका सचिव टेकेन्द्र मल्लले जानकारी..
आमा छोरीको डुबेर निधन, अर्की छोरी बेपत्ता
नेपालगन्ज, साउन ३२ । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर ६ गंगापुर कुदरबेटवामा नालामा डुबेर आमाछोरीको ज्यान गएको छ । स्थानीय सिंगैया नालामा पानीको सतह कम भएपछि मंगलबार राती जमुनीबाट कुदरबेटवा..
थप हेलिकप्टर व्यवस्था गरिदैं
नेपालगन्ज, साउन ३१ गते । सिँचाई मन्त्री सञ्जयकुमार गौतमले बाढीले सडक भत्काएका कारण राहत वितरणमा समस्या भईरहेको भन्दै तत्काल थप हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्न लागेको बताएका छन् । नेपालगन्जमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी..
राहतका लागि सहकारीको कोष
नेपालगन्ज, साउन ३१ । बाँकेमा बाढीपीडितको सहयोगका लागि जिल्ला सहकारी सङ्घ बाँकेले पाँच लाख ५० हजार रुपिया राशीको कोष स्थापना गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष प्रेम सुवेदीका अनुसार बाढीपीडितलाई सहयोग..
पीडितलाई युवा संघ बाँकेको सहयोग
नेपालगन्ज, साउन ३१ । युवा संघ बाँकेले बाढीबाट अति प्रभावित बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर २ कचनापुरमा प्रारम्भिक राहत बितरण गरेको छ । युवा संघ बाँकेका अध्यक्ष किशोर थापाको..
Results 1369: You are at page 42 of 46